Boolis Malatariya – Page 3 – Horseed Sports Club
homas Muller Oo Rumeeysan In Xulkiisa Germany Uu Ka Adkaan Karo Italia Muxuuse Ka Yiri Daafac Adag Ee Azzuri.
Xidiga Kooxda Bayern Munich iyo Xulka Germany Thomas Muller ayaa rumeeysan in dalkiisa Jarmalka uu ka adkaan doono xulka qaranka Talyaaniga kuwaas oo ku balansan axada magaalada Bordeux dalka France kulan ciyaareed ka tirsan wareega 8 aad. Muller ayaa sheegay in aysan wax dhib ah ahayn ka hor imaanshah daafacyada italia gaar ahaan BBC oo
Liiska 10 ka Xidig ee ugu qaalisan suuqa Cayaartoyda dheeleysa koobka yurub 2016+Sawiro
Waxaan idiin soo Gudbineynaa Aqriteyaasha sharafta badanoow Liis laga Sameeyey Xidigaha dheelaya koobka yurub 2016 Gaar ahaan 10 ka ugu qaalisan. Cayaartoydaan ayaa lagu qiimeeyey Lacagta uu mid waliba Joogo hadii kooxdiisu iska iibineyso ee ma aha Lacagta laga baxiyey ee kooxda uu Joogaa ku soo iibsatay Markii hore. Hadaba Waa kuwee 10 kaas Cayaaryahan?
Morata: Ma Matali Karo Qaabka Jilaaga Uu Ka Helo Tababare Zidane,Waayo Waxa Uu Jecel Yahay Filimada Murqaha Lagu Xayeysiiyo
-Gool dhaliyaha safka hore kaga ciyaara xulka Spain Alvaro Morata ayaa sheegay inuusan la dhacsaneyn dabeecada habka dookha uu ku sameyo marka uu ku jiro garoonka islamarkaana uu sameenaayo xulashada ciyaarta ka hor macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane. Dhawaan ayey aheyd markii lasoo dhameystiray heshiiska uu markale ula midoobay kooxda real , markii Juventus
Sidaan miyaa loo oyaa Lionel Messi
Laacibka 29-jirka ah ee dalka Argentina ayaa ku jabay 3-sano oo xiriir ah 3 mar oo uu soo gaaray Final koobabka Adduunka iyo Ameerika. Keddib jabkii kale ee kasoo gaaray Argentina Copa America final, waxaa Messi uu qiray in uusan Kubbadda Cagta ee Caalamiga ah waxba ka qaban doonin, wuxuuna goostay in uu ka baxo.
Milan oo Juve iyo Napoli kaga adkaatay saxiixa Gianluca Lapadula
Warar siaua soo taraya ayaa sheegaya in kooxda Acmilan ay Napoli iyo Juve kaga adkaaday loolanka loogu jiray saxiixa weeraryahanka kooxda Pescara Gianluca Lapadula. Weeraryahankan ayaa waxaa baadigoobayay kooxaha waa weyn ee Talyaaniga kadib markiiku guuleystay gool dhalinta horyaalka Heerka labaad ee dalka talyaaniga . Sky, Mediaset, Tuttomercatoweb iyo Gazzetta dello Sport ayaa dhammaan
Koox England ka dhisan oo Nani dib ugu soo celin doonto EPL
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United ayaa waxaa doonaaya Ronald Koeman oo xili dhow tababare looga dhigay Eveeton Waxaa la fahamsanyahay qarashka lagu bur-burin karo qandaraaska xidigaan inuu aad u yar yahay, Tababaraha rer Holland ayaa xidigaan ka dhigtay furahiisa koowad xidigaha uu bartilmaameydka u yahay, Everton ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka garabka
Real Madrid oo Gareth Bale ka saxiixaneysa heshiis cusub oo toddobo sanadood ah
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qorsheyneysa heshiis waqti dheer ah inay ka saxiixato weeraryahankeeda Gareth Bale. Bale ayaa iminka waajibaadka qaranka gudanaya isagoo durba saddex gool ka dhaliyay tartanka qaramada qaaradda Yurub oo xulkiisu Wales xaqiiqsaday booskooda wareega 16ka. Weeraryahankaan ayaana saddex xagaa gudahood Los Blancos la hantay labo goor tartanka kooxaha Yurub ee
Xaqiiq: Neymar Jr. oo koox cusub ku biiray, Tolow ma PSG mise Manchester United?
Weeraryahanka xulka qaranka Brazil Neymar Jr. ayaa wadahadalo soo jiitamay oo qandaraas kordhin ah la meel dhigi waayay kooxda Barcelona, waxaana furmay suurto galnimada uu laacibku kooxda Catalonia ka dhaqaaqi karo.Cabsida ah in Neymar uu koox cusub ku biiri karo ayaa muddo taagneyd weyse timid oo xiddiga weerarka ka cayaara ayaa koox cusub u dhaqaaqay.
Xulka England ayaa maanta oo isniin ah Magalada Saint Eten Dalka France kula ciyaari doona xulka qaranka Slovakia kuwaasi Oo Sedex Dhibcood Jeebka ku heeysta. Xulka England ayaa maanta oo isniin ah Magalada Saint Eten Dalka France kula ciyaari doona xulka qaranka Slovakia kuwaasi Oo Sedex Dhibcood Jeebka ku heeysta. England iyadu waxay leedahay 4
Liverpool oo Real Madrid ka Dooneysa Xidig Muhiim ah
kooxda Liverpool ayaa laga yaabaa in ay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Mateo Kovacic sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Croatia ayaa lagu soo waramayaa in aanu faraxsanayn joogitaanka kooxda Real Madrid kadib markii uu boos ka waayay kooxda xilli ciyaareedkii dhamaaday waxan uu ka